Izakhiwo zebhizinisi Ukuthengisa Nokuqasha kuvuliwe Realtyww Info
Izakhiwo zebhizinisi in Vienne
Ishicilelwe ngu David Frere-smith
ukubuka Izakhiwo zebhizinisi eshicilelwe 4 months ago
Izakhiwo zingumhlaba nezakhiwo zihlanganiswa ndawonye njengendawo. Lokhu kusetshenziswa kwavela kubanikazi bezindawo abathola igama ezincwadini zabo [zetayitela], lapho laliqonde khona ngqo ukuthi "okushiwo ngaphambili; lo mbhalo umayelana nani", kusuka ku- [Latin] prae-missus = "elibekwe ngaphambili". Ngalo mqondo, igama lisetshenziswa njalo ngobuningi, kepha libodwa ekwakheni. Qaphela ukuthi indlu eyodwa noma enye ingxenye yendawo "yindawo", hhayi "indawo", yize igama elithi "izakhiwo" libukeka ngobuningi; isb "Imishini isesakhiweni seKhasimende", ungalokothi "Imishini isesimweni sekhasimende".